I-Rubber Isetshenziselwa ini: Izindawo eziyi-49 Ozozibona Zizi-Rubber
ngu admin ngo 19-11-05
Ngabe Isetshenziswa Njani I-Rubber: Izindawo Ezingu-49 Ozozibona Zizi-Rubber seziyinto evamile! Kuwo wonke amadolobha aseMelika, indawo eya kwamanye amazwe, izakhiwo, imishini, ngisho nakubantu, kulula ukukhomba ingxenye yerabha. Kudunyiswa ngekhwalithi yayo yokunwebeka, ama-rolls enjoloba akhiwa ukuze ahlangane ...
Ivelaphi i-silicone irabha?
Ukuze uqonde ngobuningi bezindlela irabicic yama-silicone ezingasetshenziswa ngayo, kubalulekile ukuqaphela umsuka wayo. Kule blog, sibheka lapho kuvela khona ama-silicone ukuze aqonde kabanzi ngezimpawu zalo. Ukuqonda izinhlobo ezahlukene zenjoloba Ukuqonda ukuthi yini i-silicone okudingeka uyenze kuqala ...
I-TOP 5 elastomers yohlelo lwe-gasket & seal
Yini ama-elastomers? Leli gama lisuselwa ku-“elastic” -ikanye kwezinto eziyisisekelo zenjoloba. Amagama athi “irabha” nelithi “elastomer” asetshenziswa ngendlela efanayo ukubhekisa kuma-polymers ane-viscoelasticity-evame ukubizwa ngokuthi “ukuqina.” Izici zendalo ze-ela ...
Izinzuzo ezi-10 eziphezulu zokubumba umjovo weplastiki
Uma ufunda le bhulogi, ngicabanga ukuthi usuvele uyazi okuthile noma okubili mayelana nokubumba injekishini yepulasitiki, enye yezindlela ezaziwa kakhulu yokwenza isisindo sokwenza izingxenye zepulasitiki. Ukubukeza, lobu buchwepheshe buqukethe ukondla izinto zepulasitiki emgqonyeni ovuthayo. Okuqukethwe kuhlanganiswe bese kuqondiswa i ...
KUNGANI USELANDLELA USILICONE RUBBER?
Kungani Sebenzisa i-Silicone Rubber? Kuthunyelwe nguNick P ngoFebhuwari 21, '18 ama-ruble eSilicone ayizakhi zenjoloba enazo zombili izinto eziphilayo nezinto eziphilayo, kanye ne-silica ehlanzeke kakhulu enezinto ezimbili ezibalulekile. Banazo izici eziningi ezingekho kwezinye noma ...
Izinzuzo Nemikhawulo Yokulimaza Ukulimala
Izinzuzo zokubumba umjovo phezu kokubumba ama-die cast kuye kwaxoxwa ngakho kusukela inqubo yokuqala yangeniswa okokuqala ngeminyaka yama-1930s. Kukhona izinzuzo, kepha futhi nemikhawulo yendlela, nokuthi, ngokuyinhloko, isekelwe esidingweni. Abenzi bemishini yoqobo (i-OEM) nabanye abathengi abathembela ...
Ukuklanywa okukhethekile kwama-keypads enjoloba
Uma ukhiqiza ilokhi yekhiphedi yama-silicone, naka ngokucophelela indlela okhiye bakho abazofakwa ngayo ilebuli noma okumakwe ngayo. Imiklamo eminingi yekhiphedi ayidingi ukumaka, njengezinkinobho zokugcina ezizogcinwa endaweni ye-bezel yohlobo oluthile. Noma kunjalo, izinkinobho eziningi ze-nee ...
Imithetho yokuqamba ye-Silicone Keypad Design kanye nezincomo
Lapha e-JWT Rubber sinolwazi olukhulu embonini yekhiphedi yama-silicone yekhiphedi. Ngalesi sipiliyoni simise imithetho ethile nezincomo zokwakhiwa kwezinkinobho zerabic ze-silicone. Ngezansi kuneminye yale mithetho nezincomo: Ubuncane beredus cap ...
Umehluko phakathi kweRubber neSilicone
Kokubili irabha ne-silicone kungama-elastomers. Ziyizindwangu ze-polymeric ezibonisa i-viscoelastic yokuziphatha, evame ukubizwa ngokuthi yi-elasticity. I-Silicone ingahlukaniswa kuma-rubber ngesakhiwo se-athomu. Ngaphezu kwalokho, ama-silicone anezindawo ezikhethekile ngaphezulu ...
QAPHELA ISIBHENGEZO SOKUQHAWULA KONYAKAZI WOKUKHANGELA
Isilawuli kude yithuluzi lokufaka elingasetshenziswa ukulawula ucezu lwemishini kagesi etholakala kude nomsebenzisi. Izilawuli kude zisetshenziswa ebangeni elikhulu lamadivayisi we-elekthronikhi wabathengi. Izilawuli ezijwayelekile zokulawula kude zifaka amasethi wethelevishini, abalandeli bebhokisi, imishini yokulalelwayo, nohlobo oluthile ...
Ngabe Ikhiphedi yeSilicone isebenza kanjani?
Okokuqala, ake sibheke ukuthi yini i-Silicone Keypad? Izikhiphedi zerabic ze-Silicone (ezaziwa nangokuthi yi-Elastomeric Keypads) zisetshenziselwa kakhulu kwimikhiqizo yabathengi neyezimboni ye-elekhtronikhi njengeyindleko ephansi nesisombululo esithembekile sokushintsha. Ngendlela ebaluleke kakhulu, ikhiphedi ye-silicone empeleni "iyimaski" ukuthi ...
Zisebenza kanjani i-Rubber Keypads?
Zisebenza kanjani i-Rubber Keypads? Isiguquli sokhiye werabha wekhiphedi sisebenzisa irabha eyenziwe nge-silicone ebunjiwe enamaphilisi ekhabhoni e-conduction noma nge-activators yerabha engahambisi kahle. Inqubo yokubumba yokucindezela idala iwebhu ezungeze isikhungo sezindikimba. Lapho ikhiphedi icindezelwa, iwebhu iyawa ...
Konke Odinga Ukwazi Ngokujova Ukujova
Kuyini Ukufakwa Komjovo: Ukujova kwenaliti inqubo yokukhiqiza yokukhiqiza izingxenye ngevolumu enkulu. Isetshenziswa kakhulu ezinqubweni zokukhiqiza ngobuningi lapho le ngxenye efanayo idalwa izinkulungwane noma ngezigidi zezikhathi zilandelana. Uyini ama-polymers ...
Konke Odinga Ukwazi Nge-Plast yeABS
I-ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) ipulasitiki eyi-terpolymer, i-polymer equkethe ama-monomers amathathu ahlukene. I-ABS yenziwa nge-polymerizing styrene ne-acrylonitrile phambi kwe-polybutadiene. I-Acrylonitrile iyi-monomer yokwenziwa eyenziwe ...
Izinto Ezijwayelekile Zepulasitiki Okudingeka Uzazi
Okulandelayo ukukhetha kwezinto zepulasitiki ezisetshenziswakwa njalo esikhungweni sethu sokukhiqiza. Khetha amagama wezinto ezibonakalayo ngezansi ukuze uthole incazelo emfushane nokufinyeleleka kwemininingwane yendawo. 1) I-ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene iyi-Copolymer eyenziwe ...
Uyini Umehluko phakathi kweSilicone Rubber ne-EPDM?
ngu admin ngo 18-11-05
Lapho ukhetha irabha elizosetshenziswa, Onjiniyela abaningi bagcina bedinga ukukhetha phakathi kokukhetha i-silicone noma i-EPDM. Ngokusobala sinakho ukuthanda i-silicone (!) Kepha bobabili bahlangana kanjani bodwa? Yini i-EPDM futhi uma uzithola udinga ukukhetha phakathi kwalokhu okubili, u ...